Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Blekinge län / Karlskrona
Karlskrona waxeey ku taala bada agteeda ee dhinaca bari-konfureedka Iswiidhan. Magaalada waxeey ku dhisan tahay jasiiradooyin, waxeeyna uu dhawdahay jasiirado yaryar iyo baadiyaha. Degmada waxeey lee dahay xaafado badan oo leh adeeg fiican.
3,345 kiilomitir oo laba jibaaran
Kalmar 83 kiilomitir
Malmö 205 kiilomitir
Köpenhamn 249 kiilomitir
UNESCO ayaa magaalada ku magacaawaday mid taariikhi ah laakin isla markaas Karlskrona waa degmo casri ah oo leh jawi ganacsadeed oo koraayo iyo hey'adda dowloadeed oo badan o shaqo dhiibe ah.
Degmada Karlskrona waxeey lee dahay howl xanaandeed oo dhiisan looguna tala galay caruurta ku jiro da'da 1 ilaa 5 sano. Waxaa jiro dugsi xanaanado ee degmada lee dahay iyo kuwo madax banaan. Sido kale waxaa jiro dugsiyaasha xanaanada maalmeedka.
Waxbarashada dadka waaweyn Iswiidhiska soo galooytiga Dugsiga Litorina Jaamacada Farsamada Blekinge
Waxaa jira ruggo caafimaad oo badan oo ku yaala magaalada ugu muhiimsan, sidoo kalena rugaha caafimadka caruurta iyo caafimaadka hooyoyinka iyo isbitaalka Blekinge. Waa maamulka gobolka Blekinge kuwa maamula daryeelka bukaanka. Talobixinta caafimaadka 1177 waxaad weeydiin karto su'aalo, ka heli karta talo kana heli kartaa warbixin la isku soo aruuriyay oo ku saabsan daryeelka caafimaadka iyo bukaanka Karlskrona. Waxaad booqan kartaa bogga 1177 ama wici kartaa lamabarka telefoonka 1177.
Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka bukaanka
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha. Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka dukaanka Maamulka gobolka Blekinge.
Waxaad xaq uu lee dahay in aad hesho caawinaad-turjumaan markii aad xariir la yeelaneeyso hey'adda dowlada dhamaantood.
Gudaha Karlskrona waxaad ku dhexraceeysaa Gaadiidka-Blekinge. Gaadiidka sii fiican ayuu dhisan yahay, ayadoo la kaashanaayo boggag iyo abyal waa sahlan tahay in la helo jadwalka-socdoka iyo bas saxsan.
In kale ka akhriso bogga Gaadiidka-Blekinge.
Karlskrona waxeey lee dahay suuq shaqo oo kala duwan, laga bilaabaa isbitaalo ilaa shirkado caalami ah oo guul gaaray. Shaqo dhiibaha weeyn waxaa ka mid ah tusaale ahaan ABB High Voltage Cables, Dynapac, Roxtec, Degmada Karlskrona, Ericsson, Saab Kockums, Auralight och Maamulka gobolka Blekinge. Hey'adda dowladeed Difaaca-bada, Wasaarada difaaca, Hey'adda degaankana waa shaqo dhiibe weeyn.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Karlskrona